विपक्षी शीर्ष नेताहरुले माधव नेपाललाई लगातार किन भेट्दैछन् ? | Safal Khabar
विपक्षी शीर्ष नेताहरुले माधव नेपाललाई लगातार किन भेट्दैछन् ?
बुधबार, ०२ असार २०७८, १९ : २७
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ ।
डा. भट्टराई उनलाई भेट्न वुधबार नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । यस अघि सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले लगातार माधवकुमार नेपाललाई भेटिरहेका छन् ।
विपक्षी पाँच दलबीच चुनावसम्मकै लागि गठबन्धन बनाएर जाने सहमति भैरहेका कारण शीर्ष नेताहरुले माधव नेपाललाई भेट गरिरहेका बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको प्रस्ताव अघि बढाइरहेका कारण विपक्षी शीर्ष नेताले माधव नेपाललाई लगातार भेट गरेका हुन् । विपक्षी शीर्ष नेताहरुहरुलाई माधव नेपाललाई चुनावसम्म गठबन्धन बनाएर जान भनिरहेका छन् ।
यसैका कारण माधव नेपाललाई नेताहरुले भेटवार्ता गरिरहेका हुन् । माधव नेपाललाई दोस्रो तहका एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकता गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । जसका कारण माधव नेपाल यतिबेला रनभुल्लमा परेका छन् । एकातिर विपक्षी गठबन्धनको दबाब अर्कोतर्फ एमालेका दोस्रो पुस्ताको नेताको दबाबका कारण माधव नेपाल पछिल्लो समय थप तनावमा परेका छन् ।